‘एेना’ भित्रको एउटा कथाः पापीघाट - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘एेना’ भित्रको एउटा कथाः पापीघाट
पिसाब फेरि सकेपछि ऊ सन्तुष्ट भईजस्तो लाग्यो। आफ्नो कम्मरमुनिको घाँगर तल नसारेरै ऊ उठी। मलाई उसका सेता तीघ्रा हेरिरहूँजस्तो लाग्यो। उसले हाँस्दै आफ्नो सेतो पटुकीले मलाई एक फन्को बेरी। आफू पनि त्यसमै बेरिई र भनी– करन, आँखा चिम्म गर् त।
म छु नि लाटा, तेरी दी १
एक दिन गाईवस्तुहरू मेलामा छोडेर भैँसीको सिङ आकारका आँख्लाहरू टिप्दै भैँसिङेको गुफाजस्तो झाडीभित्र पुग्यौँ दुवै जना। सूर्यका किरणसमेत नपर्ने झाडी–कुञ्ज डर लाग्दो थियो। लीलाले आफ्नो कम्मरबाट सेतो पटुकी खोली र लहराको काँपमा झन्ड्याई। मेक्सीजस्तो घाँगर सर्लक्क माथि उचाली। मेरै सामुन्ने गुलाबी अनुहार लगाएर टुक्रुक्क बसी अनि ‘सिइ ईईर्।।’ पिसाब फेर्न थाली। मैले हेरिराखेँ। उसको पिसाब ओरालो भुइँमा सानो खोलाजस्तै हतारमा बगेर गयो। म आज सोच्दै छु, उसले होइन, उसको पिसाबले मसँग लाज मानेर त्यति चाँडो बगेर गयो होला।
भनी– करन, मेरो गालामा माया गर् न १
लीला दिदी १ म चन्द्रेलाई तेरो गालामा म्वाइँ खाइदे भनूँ ?
लीलाले मलाई अँगालो हालेकी थिई। भनी,
मलाई अचम्म लाग्यो, त्यति माया गर्ने लीला दिदी आज किन यस्तो गर्दै छे रु म उसको बाहुपाशमा थिएँ।
पारि जङ्गलमा सुरिलो आवाजमा गीत गुञ्जियो,
पारि पुगेपछि ऊ खितिति‘ हाँसी, बल्ल घाँगर तल झारी। खोलाको पल्लो बगरमा साना–साना पानीका खाल्डाहरू थिए। एउटा सङ्लो पानी भएको खाल्डोमा ऊ घोप्टो परेर सतर्कताका साथ हात पानीमा यताउति गर्न थाली। मैले हेरिरहेँ। एक छिनपछि पानी छप्ल्याङछप्ल्याङ गर्दै माझी औँलाजत्रै माछो मुट्ठीमा ल्याई। फुत्केला भन्ने डरले जतनसँग अर्को हातको चोर औँला र बूढी औँलाले त्यसको पुच्छर समातेर देखाउँदै भनी,
करन, तेरो ब्वारी यत्रै छ ? ”, अनि हाँसी खितिति‘ !
माझी औँलाजत्रो माछो मुट्ठीमा च्यापेर लीला दिदी अघि लागी। म उसको पछि–पछि। एकै सासमा हामी डाँडामा पुग्यौँ। डाँडाको पल्लोपट्टि अलि गहिरोमा सुरम्य स्थान थियो। खेतजस्तै गह्रा–गह्रा भएको। गाउँलेहरू त्यस ठाउँलाई ‘बाजथैल’ भन्थे। सधैँ बाँझो रहने बाजथैलमा यसपालि गगने भुलले मकै लगाएको थियो। बाँदर, दुम्सी र मलपासाले मकै नाश पारिदिन्थे। तिनैबाट खेतीपाती बचाउनु ठूलो समस्या हुन्थ्यो। गगने काका बाजथैलको सिरानमा कुणो ९टहरो० बनाएर आफैँ मकैखेती कुर्थे। खाना त्यहीँ बनाउँथे। धुवाँ भइरहोस् भनेर आगो बालिएको हुन्थ्यो। केही दिनपछि मकै पोलेर खाने असाध्यै मजाको समय आउँदै थियो।
आगो फुक्तै भनी, ‘तेरो ब्वारी पोलेर खाने के।’
यति भनी र खितित‘ हाँस्न थाली। म पुनः लजाएँ। उसले लाज मानिनँ। मैले उसको लामो चुल्ठो समातेर पिठ्युँमा मुड्कीले प्वाक्क हानेँ। फेरि खितिति‘ हाँसेर भनी ‘ल्या, तेरो ब्वारी पोलेर खाउँ।’
दनदनी आगो बल्यो। उसले मुठ्ठीमा च्यापेर ल्याएको माझी औँलाजत्रो माछो आगोमा हाली। बडो ध्यानपूर्वक छेस्काले माछोलाई मजासँग पोली। आगोका फिल्का ल्याएको मालुका पातमै दुई भाग लगाई। फेरि खितिति‘ हाँसेर भनी, लौ खा, तेरो पोलेको ब्वारी, खूब मीठो हुन्छ।
एक दिन, नौरथाको चौथो दिन थियो क्यारे। लीला दिदीले मलाई बगरे खोलातिर लिएर गई। उसका हातमा एउटा पोको थियो। सायद त्यो कपडाको पोको थियो। बगरे खोलामा पुगेपछि अलि तल उँधोपट्टि दुइटा ठूला ढुङ्गाको बीचबाट छहराजस्तो बनेर पानी बग्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ पुगेर कपडाको पोको एउटा ढुङ्गामा राखी। मलाई ‘तँ ढुङ्गामै बस’ भनी। आफू चोलीका तुनाहरू फुकाल्न थाली।
मान्छस् कि, मान्दैनस् रु
मैले जिद्दी गरेपछि आमाले भन्नुभयो,
‘अर्कासँग बात लागेका, तल्जात–मूलजात गरेका, अर्काको गर्भ बोकेका, हाडनाता करणी गरेका र गाउँबाट निकाला भएका सप्पै पापी त्यैँ जान्छन्, पापीघाटमा।’
आफ्नै मनसँग प्रश्न गरेँ– लीला दिदीले के पाप गरेकी छे र रु मसँग भागेर पापीघाट जाऊँ भन्छे। जात नमिल्ने आफूभन्दा सात वर्ष कान्छो र नाबालक बाहुन केटालाई केटीले भगाउनु सायद पाप मानिथ्यो कि ? के त्यही डरले मलाई भागेर पापीघाट जाऊँ भनेकी हो ? त्यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म भेटाएको छैन मैले।
मलाई कुतूहलता जाग्न थालेको थियो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरका अगाडि घाँगर माथि सारेर पिसाब फेर्ली कि नफेर्ली ? मलाई देखाएझैँ सेता तिघ्रा देखाउली कि नदेखाउली ? क्रौन्च पन्छीले शिकार झम्टिन तयार भएजस्ता आफ्ना युगल स्तन उँधो पारेर देखाउली कि नदेखाउली रु यो जिज्ञासा मेरो मनमा यति तीब्र भयो कि तत्काल मलाई लीला दिदीसँग बगरे खोलामा उसले नुहाएको हेर्न जाने मन भयो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरको गालामा म्वाइँ खान्छे होला। मलाई सारै नरमाइलो लाग्यो।
समय कति चाँडै भागेछ। १५ वर्ष पुगेको पनि थाहै भएन। पढ्नकै लागि आमाले मलाई मधेस पठाउने हुनुभयो। मधेस जाने कुराले मेरो मनस्थिति खल्बलियो। मेरो स्वर्णिम गोठाले जीवनको अन्त्य हुनै लाग्यो त ? लीला दिदीको सानिध्य, गुड–चामल खुवाएको हातको स्पर्श, अमुक प्रेम, यी सबै यतिसम्मकै लागि मात्र थिए त रु बाजथैलमा आगोमा माछा पोलेर खाएको प्रेम, भैँसिङेको झाडीभित्रको लीलादीको न्यायो म्वाइँ, बगरे खोलाको दृश्यमोहबाट के अब म टाढिने भएँ त ?
यिनै अनुत्तरित प्रश्नले उब्जाएका संशय भावले मेरो मनमा छटपटी भइरह्यो। झोला भिरेर जाने बेलामा लीला दिदीको अनुहार अश्रुमय थियो। आँसु पुछ्दै डाँडाको फेदीमा आएर उसले भनी,
चाँडै पढेर फर्कनू ल, तँ र म पापीघाट जाउँला है ?”, मैले लीलादीको आँसु पुछ्दै भनेँ – छिट्टै आउँछु।
ख्वै रौतेला, सुनेका कुरा हुन्। कोई भिरङ्गी लागेर मर्‍यो भन्छन्। कोई एसिड कि के‘ लागेर मर्‍यो भन्छन्। कोई चाइँ सेटकी छोरी कि जोइसँग लागेको देखेर सेटले मार्‍यो भन्छन्। मुुक्कुर कुरा चाइँ के हो ? था छैन।
उसको कुरा सुनेर मलाई आकाशबाट खस्दै छु कि जस्तो लाग्यो। खुट्टा धरमराए। मैले लीला दिदीको अनुहार सम्झेँ। कठैबरा ! लीला दिदी, म आउनुभन्दा तीन दिनअघि उसले मलाई छक्कबहादुरले पठाएको चिठी पढेर सुनाउन लाएकी थिई। चिठी पढ्दै जाँदा अन्तमा गीतमा लेखेको थियो,
छ जना भूतजस्ता पापीघाटका खतुकीहरू आएका थे रे। दिउँसो मसानीडाँडामा लीलालाई भेटेर ‘तिम्रो लोग्ने छैन, कसरी जिन्दगी काट्छ्यौ ? हिँड मसँग पोइल’ भनेर एक बन्तोलाले भनेछ। रिसले लीलाले आँसीले टाउकोमा हिर्काइ अरे। रगतका धारा लागेछन् अनि सँगै आएका अरु ६ जनाले हातखुट्टा पटुकीले बाँधेर डोलीमा हालेर लगे अरे।’
‘हात हालेर अर्काकी जोई लिने चलन त खत्तम हो दिदी, हैन ?’, बिना आक्रोश पोख्दै थी।
‘जोई मात्र हो र ? कन्ने केटी पनि तानेर लैजान्छन्, पिचासहरू,’ ईश्वरा आन्टीले रोष प्रकट गरेकी थिइन्।
उफ् ? सेतीको बगरमा, पापीघाटको छालमा, मेरी लीलादीलाई उत्तानो पारेर सुताइएको थियो। मेरा लागि त्यो क्षण असह्य बन्यो। कहिल्यै नआउनुपर्ने त्यो क्षण कसरी मेरा अगाडि नमेटिने यथार्थ बनेर आयो। अघि कखरा पढ्दा ‘सिलपाटी’मा लेखेर मेटेजस्तो त्यो क्षण मेरो स्मृतिपटलबाट मेटिइदिए हुन्थ्यो।
साहित्यसंसार डट कमबमट